Ny Valosoa, 11 Jolay 2017. Ny Vahoaka, Marc Ravalomanana, Tim, Hvm, Smm… | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Ben’ny tananan’ny Ampefy nisy namono, Randrianarilahy Fidy. Nitsapa alahelo ny antoko Tim.
Olivier Mahafaly. Hosamborin’ny fanjakana Atoa Marc Ravalomanana ? →
Ny Valosoa, 11 Jolay 2017. Ny Vahoaka, Marc Ravalomanana, Tim, Hvm, Smm…
Fankalazana ny 15 taonan’ny TIM
Voaporofo fa olon-kendry ny mpomba an-dRavalo
Nandritra ireny hetsika nataon’ny Tiako i Madagasikara ny sabotsy teo ireny dia nisy anarana niverimberina tao ambavan’ny olona ka anisan’izany ny Prefet de Police eto Antananarivo sy ny Lehiben’ny CIRGN . Ireo olona ireo mantsy no hita sehatra mivantana miatrika ny mpanao gazety sy ny teny an-kianja sy niseho tamin’ny fahitalavitra . Ny marina anefa dia misy lehibeny izy ireny izany hoe : Ilay tena manome ny baiko . Izy mirahalahy ireo no hitan’ny olona avy ety ivelany dia toa izy ireo no voatonontonona matetika . Tsara anefa ny manamarika fa mbola ambonin’izy ireo ny Ministra , ny Praiministra , ny Filoham-pirenena .
Tsy nandrenesam-peo izy ireo tamin’iny Sabotsy iny fa mihainohaino any ambadimbadika any . Azo hambara fa mialokaloka . Tsy maintsy nandefa mpitsikilo ny fitondrana nanaraka ny fivoaran’ny raharaha teny Anosy hatraty Analakely ka hatreny Faravohitra ; teo koa ny fiandrasana kendry tohana ny mpomba ny Filoha Marc Ravalomanana amin’ny mety fanaovana korontana saingy tsy nisy izany .
Voaporofo tamin’iny Sabotsy iny fa olon-kendry ny mpomba ny Filoha Marc Ravalomanana satria tsy mpamaky trano sy mpangalatra toy ny fanaon’ny sasany .Tsy maintsy atao ao amin’ny kianjan’i Mahamasina ny fety hoy ny Filoha Ravalomanana ary ho tohizana any amin’ny faritra . Maro no nilaza fa rehefa ny fitondrana no mampiasa mpitandro filaminana amin’ny mpanao hetsika Politika dia mampiseho ny fahalemeny izany . Azo antoka fa tsy misy firenena any ivelany nankasitraka ny fihetsiky ny fitondrana tamin’iny fampisehoan-kery tamin’ny Sabotsy iny . Hoy ny olona hoe : Alefaso foana ny fety fa vonona foana izahay, sa ahoana hoy ianao ?
Manohy ny fanalana baraka ny firenena
Nanomboka ny taona 2009 sy nandritra ny fotoanan’ny tetezamitan-dRajoelina Andry no niseho matetika ny fanalam-baraka ny firenena. Tsy adino, fa tantara mipetraka ny zava-nisy tany amin’ny fivoriamben’ny Firenena Mikambana ka nandroahan’ny mpivory ny filohan’ny tetezamita ny toeram-pivoriana satria “tsy nisy kalitao”. Nisesisesy ihany koa ireo fihetsika mamohehitra samihafa na avy amin’ny fitondrana tetezamita na ireo mpanao politika mpanongam-panjakana na ireo miaramila sy zandary ary polisy, nanohana azy, tamin’ireny fotoana ireny. Tsy nisy niafina teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena izy ireny ary nanala Baraka ny firenena Malagasy.
Mialokaloka any amin’ny misy azy avy ireny olona nanala Baraka firenena ireny ary toa milamindamina kanefa tokony handoa sazy na onitra amin’ny firenena…Fa na dia efa ao anaty fitondrana lazaina ho mijoro ara-dalàna aza ankehitriny, dia toa mbola miseho hatrany ity fanalam-baraka ny firenena ity. Iray miharihary, hitam-poko hitam-pirenena araka ny fitenenana ny famoretana ny Demôkrasia eto, izay miseho amin’ny tsy famelana ny olona, ny vahoaka haneho hevitra ankalamanjana sy amin-kalalahana. Efa fomba ratsy tany amin’ny andron’ny tetezamita io ary nolovain’ny fitondrana Hvm izay mpandray leson-dratsy.
Tranga iray lehibe ihany koa ary mahalasa saina lalina sy mampanahy ny fihetsik’ity fitondrana ankehitriny ity tsy miahotra amin’ny famoretana ny sendikà. Iaraha-mahita tsara izao ny nanaovana ireo mpitarika ny sendikà teo anivon’ny orinasa Jirama, ny tao amin’ny Air Madagascar, sy ny tany amin’ny sendikà hafa. Natao nahita faisana izay mpitarika. Mahatalanjona tanteraka ny mahita ny fitondrana tsy miraika ary tsy mivaky loha mihitsy na kely aza ny amin’ny didy efa navoakan’ny filankevi-panjakana, fa nahazo rariny ary afaka miverina miasa ireo mptarika efa-dahy eo anivon’ny kaompania Air Madagascar. Hatreto tsy ampiharina ny lalàna ny momba azy ireo, fa minia mikimpy ny fitondrana. Henatra ho an’ny firenena izany ary manala Baraka eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny amin’ny anaovana ireo mpitarika sendikaly sy ny mpikambana ao anatin’izy ireny. Maro ireo endrika isehoan’ity fihetsika fanalam-baraka firenena ity ato anatin’izao repoblika faha-4 ity izao.
Mbola iaraha-mahita ankehitriny ity fihetsika feno tsy fahamatorana ataon’ny fitondrana Hvm ity nanoloana ny hetsika nokasain’ny antoko TIM notanterahina teny amin’ny Kianjaben’i Mahamasina tamin’ity Sabotsy teo. Mandray fanapahan-kevitra “mitranga mihemotra tahaka ny lelon-jaza”. Ny fiziriziriana sy fidrikinana tamin’ny fisakanana io hetsika io dia henatra ho an’ny firenena ihany koa. Midika tsotra izao izany, fa ezahin’ny fitondrana Hvm izay tsy hisiana antoko matanjaka eto amin’ny firenena, indrindra ka antoko afaka tsara ny hifaninana aminy sy handresy azy tahaka ny antoko TIM…
Tsy azo ekena intsony ny mbola hitohizan’ny fanalana baraka sy manome henatra ny firenena ataon’ny manampahefana sy mpitondra firenena. Izany ihany no mahatonga ny firenena any ivelany sasany na vahiny monina sy mampiasa vola eto amintsika manao tsinontsinona ity firenena sy vahoaka nampahantraina ity…
Mbola tokony hankalazaina any ny faha-15 taonan’ny antoko TIM
Miseho avokoa ny ankamaroan’ny fanehoan-kevitra amin’izao fotoana izao mahakasika ny fankalazana ny faha-15 taona nijoroan’ny antoko T.I.M. Isan’ny mangataka ny mbola hankalazana izany ny mpomba ny Filoha Ravalomanana aty Alaotra izay tsy ny mpikambana eny anivon’ny antoko ihany fa ireo rehetra mpanara-dia azy. Maniry ny hanatanterahana izany araka izany ny rehetra. Isan’ny antoko nahavita betsaka taty Alaotra ny antoko T.I.M izay tarihan’ny Filoha Ravalomanana hoy izy ireo ka rariny sy hitsiny raha tsy ho diso anjara amin’ny fankalazana manetriketrika io faha-15 taona io. Azo hambara ihany koa fa isan’ny matanjaka aty Alaotra ny mpanara-dia ny Filoha Ravalomanana izay efa voaporofo tamin’ny fifidianana izay nisy hatramin’izay izany. Raha ny fihaonana farany teo, tamin’ny Filoha Ravalomanana taty Ambatondrazaka dia efa porofo fa mbola manankina ny ho avin’i Madagasikara aminy ny vahoaka aty Alaotra.
Nanomboka tany amin’ny 2009 no nitontongana ny fari-piainan’ny olona ary vao mainka aza latsaka an-katerena amin’izao fotoana izao. Tsy hary fahita taty Alaotra ny fanafihan-jiolahy nahery vaika saingy iainana izany amin’izao fotoana izao. Mitaky olona mahatoky hamerina amin’ny laoniny ny fiainam-bahoaka hoy ny ankamaroan’ny olona izay tsy misy afa- tsy ny Filoha Ravalomanana ihany no afaka mahavita izany sy hatokisana ahavita izany. Betsaka no naniry ny nandeha niakatra tany Antananarivo ny mpanara-dia an-dRavalomanana Marc sy ny antoko T.I.M tamin’ny sabotsy lasa teo saingy noho ny fahasahiranana sedraina eo amin’ny fameloman-tena dia tsy afaka izy ireny. Raha toa kosa ka raikitra ny fankalazana izany aty Alaotra dia milaza ny tsy ho diso anjara amin’ny fanatrehana izany ny rehetra.
Efa betsaka rahateo ny olona no efa leo tanteraka amin’izao fitondrana misy ankehitriny izao izay isan’ny nampahantra ny vahoaka.
TIM avy any Ankazobe
Mbola vonona hiakatra amin’ny fotoana manaraka
Taorian’ny fandaharana tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray , dia vao mainka mafy amin’ny mpikatroka Tim avy any amin’ny faritra ny fanenjehana miharo fanesoana nataon’ny senatera Olivier Rakotovazaha tamin’ireo Tim nifanandrina taminy. Na rahoviana, na rahoviana hoy ireo mpikatroka Tim avy any amin’ny faritra dia vonona foana izahay hanatevina ny hetsika amin’izay ilàna azy , na eto Antananarivo io, na any amin’ny faritra hafa ihany koa.
Tsy manaiky lembenana amin’ny antsojay mahazo azy ireto mpikatroka Tim ireto, ary tsy maintsy mandresy hatramin’ny farany raha ny fanazavana azo tamin’ireo mpikatroka Tim avy any amin’ny faritra, ka anisan’izany ny avy any Ankazobe. Vonona ihany koa izy ireo hampandany ny filoha Marc Ravalomanana amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2018 , ary tsy maintsy mandresy no tanjona amin’izany. Nanamafy izy ireo, fa tsy misy afa-tsy Ravalo irery ihany sisa afaka mamaha ny olan’ny vahoaka Malagasy sy hitondra fampandrosoana ho an’ny firenena satria kobaka am-bava avokoa izay rehetra nataon’ny fitondrana Rajaonarimampianina teto izay.
Tsy hita izay fampandrosoana hoy izy ireo ,ary fitiavan-tena no betsaka fa ny vahoaka dia tofezaky ny hanoanana sy ny fidangan’ny vidim-piainana isan’andro lava, ka miandry olona mahay sy tsara sitrapo hanafaka an’i Madagasikara haingana dia ny filoha nasionalin’ny antoko TIM.
Senatera mpikarama an’ady sy mpamadika nampitenenina
‘Fanakorontanana no nataon’ny antoko TIM , mampalahelo fa ray amandreny be no nitarika ny vahoaka hanakorontana . Manainga ny mpitandro filaminana handray andraikitra . Maninona tsy amin’ny toerana iray no hanaovana ny hetsika fa tsy eny an-dalambe . Tsy mbola izao hono no hanaovana fampiasan-kery fa amin’ny fifidianana’ .
Izany no fanambaràna nataon’i Mamitiana Faberger mpanao politika mpamadika palitao, mpikarama an’ady politika, depiote teo aloha Tiako i Madagasikara , lasa senatera HVM amin’izao fitondràna izao . Aoka re Andriamatoa senatera fa fantatray tsara ianao tamin’ny tolona nataon’ny vahoaka nanohitra ny mpanongam-panjakàna teto , saingy tsy mahatsara anao ny fitanisàna izany ary tsy mahasoa ny firenena koa dia aleo tsy miteny .
Ka rehefa mba manana seza manga aloha dia aza mba miana-kendry ananatra ny filoha Marc Ravalomanana izay nanana anjara lehibe nahatonga anao amin’izao toerana misy anao izao . Nanao hetsika tonga teny an-dalambe ny HVM tao anatin’ny volana jona tsy azo nanaovana hetsika politika izay ianareo ihany no namoaka izany didy izany nankalaza ny faha- 3 taonanareo tany Toliara tsy nisy nibedy , koa maninona rehefa ny Tiako i Madagasikara izay niandohanao no manao fety dia tsy azo atao .
Tsy ianareo HVM foana ve no mampiseho hery eto fa antoko matanjaka indrindra eto Madagasikara e ? ka aza mirediredy e!
HVM : Hery tsy Voafehy amin’ny fanajana ny Marina
« Porofo izao fa antoko matanjaka ny HVM ka manaova toy izao izay mihevitra ho matanjaka » hoy ny filohan’ity antoko ity, Rakotovao Rivo, tamin’ny kabariny tany Toliara rehefa nikabary nanokatra ny fankalazana ny faha-3 taonan’ny antoko izy. Nitovy ny akanjon’ny nanatrika ny fankalazana. Rehefa dinihana ny zava-misy dia toa matanjaka tokoa ny antoko eo amin’ny fitondrana. Eo amin’ireo rafitra rehetra mijoro amin’izao Repoblika IV izao : ny rafitra mpanatanteraka, mpikambana Hvm ny maro an’isa ao amin’ny governemanta mba tsy ilazana fa izy rehetra rehefa nesorina ny minisitra TIM. Torak’izany koa ny ao amin’ny Antenimieran-doholona satria azo isaina amin’ny rantsan-tànana ny senatera lany tamin’ny anaran’ny antoko hafa. Na dia tsy nisy depiote lany tamin’ny anaran’ny Hvm aza dia teraka ho azy ao amin’ny Antenimierampirenena ny vondrona parlemantera HVM.
Ny filohan’ireo andrim-panjakana hafa: HCC, BIANCO, CENI, dia ny filohan’ny Repoblika no nanendry azy ireny. Ny tomponandraikitra voalohany any amin’ireo orinasam-pirenena: JIRAMA, Air Mad dia notendrena tao amin’ny filankevitry ny minisitra. Ny lehiben’ny fibaikoana ireo vondron-tafika isan-tokony dia torak’izany ihany koa.
Araka izany dia ny fitondrana daholo no mikaomandy ny familiana ny làlan-kizoran’ireo rafitra rehetra ireo. Mizotra any amin’ny làlana tsy tokony alehany daholo anefa izy ireo tao anatin’izay telo taona sy fito volana nitondran’ny Hvm izay. Matoa in-telo niova ny lehiben’ny governemanta dia mariky ny tsy fahombiazana izany. Ny praiminisitra voalohany, mpikambana mpanorina ny Hvm notendren’ny Filohan’ny Repoblika IV ho loholona dia tsy mankasitraka ny fanapahan-kevitry ny “préfet de police” momba ny fanakanana ny antoko TIM tsy nankalaza ny faha-15 taonany tao Mahamasina. Misy kosa anefa senatera avy amin’ny antoko hafa notendren’ny filohan’ny Repoblika IV ihany koa kanefa milaza fa miombon-kevitra amin’ny fitondrana satria tsy ekeny, hono, ny hitarihana ny vahoaka hatao “sorona”.
Raha araka ny fomba nentin’ity politisiana nanohana ny heviny ity dia sady fiarovan-tseza sy mety ho marina izany fomba fijery izany kanefa samy hafa ny hetsika tamin’ny taona 2009 izay nananika Lapam-panjakana hanongam-panjakana sy ny tamin’ny sabotsy 8 Jolay 2017 lasa teo izay fankalazana ny faha-15 taonan’ny antoko Tim ka lanonana no nokasaina natao ary tao anaty kianja mifefy. Aleon’ity politisiana ity manemitra kianja tsy misy olona ireo “mpitandro ny filaminana” maro be, toy izay manao haza lambo ireo jiolahy manao fanafihana mitam-piadiana ny mpiray firenena aminy. Raha rafitra no asian-teny dia manana ny “hery” rehetra eo am-pelatanany tokoa ny mpitondra amin’izao fotoana izao. Manampatra “hery” ihany koa ny manampahefana amin’izao Repoblika IV izao ary entiny maneho izany ny fanitsakitsahana lalàna.
Koa raha misy olompirenena na vondron’olona sahy mamotsipotsitra izany fibolisarana izany dia tsy menatra mampiasa ireo fehezin’ny teny fanevany “Tanindrazana sy Lalàna” sy “Lalàna sy Filaminana” hampitahotra sy handemy saina amin’ny firongoana fitaovam-piadiana izay natokana hiarovana ny Tanindrazana amin’ny mpanafika avy any ivelany. Tsy vitan’izay fa hampiasaina tahaka ny jiolahy ihany koa ireto farany amin’ny fidirana an-keriny sy fandrobana fananam-bahoaka toy izay nitranga ny Alarobia alina 5 Jolay 2017 teo, tao Mahamasina.
Tsy fahita eran-tany ihany koa ny tsy fanajana sy tsy fampiharana didy navoakan’ny fitsarana ataon’ny fitondrana ka tsy mahagaga raha mitranga etsy sy eroa ny fitsaram-bahoaka. Tsy ny Firenena velively no tena marary sy mila fitsaboana fa tratry ny tazom-pahefana sy aretim-bola ireo nomena fahefana sy ireo notendrena ho mpikambana any amin’ny ambaratongam-pahefana any ka ny olompirenena no mizaka ny tsy eran’ny aina. Hery vaovao no nandrasana kinanjo “fery vaovao” mangotanatana no misokatra sy sarotra tsaboina no mikiky ka manana adidy ny olompirenena rehetra hamongotra hatramin’ny fakany izany.
Tsy mitady toerana ministra ny filohan’ny SMM
Hanohy ny fitokanany hatrany ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara na ny SMM, manoloana izany dia mitady hevitra mafy ny handravana izany hetsiky izy ireo izany ny mpitondra eto amintsika amin’ny alalan’ny fampisaraham-bazana azy ireo. Misy mantsy amin’izao fotoana izao no manely tsaho fa maniry toerana ministra ny filohan’ny SMM, Fanirisoa Ernaivo matoa manao io di-dohany mitarika fitokonana io.
Nisy ny fanambarana nataony tamin’ny tambazotran-tserasera ny faran’ny herinandro teo milaza fa:” izaho Fanirisoa Ernaivo dia tsy mitady velively ary tsy hanaiky velively hiditra ao anaty ny governemanta na izao na ny ao aorian’izao governemanta izao! tsy mitady poste ministeriel ary tsy hanaiky mihitsy ho nommé amin’ izany! fitakiana sendikaly no tarihiko mba ho fanatsarana ny asam-pitsarana ary ny fahaleovantenan’ny fitsarana mba hametrahana ny fototry ny tany tan-dalàna no tanjona hapetraka ! manentana antsika mpitsara rehetra hiray hina ka hiara-hitaky an’izany”.
Izao tsy fanatanterahan’ny fitondrana ny didy efa navoakan’ny fitsarana tao ho ao izay tokoa dia tokony hampivondrona hatrany ny mpitsara eto amintsika, ary ao anatin’izy ireo ihany koa no tokony hiainga ny tena fanavaoazana ny fitsarana satria ity sehatra ity koa dia malaza amin’ny resaka kolikoly sy fahalovana.
Tsy nandaitra ny fanentanana isam-pokontany nataony
‘Aza manao maloto eto fa mahavoasazy’ , izany no hita amin’ny toerana maro eny andalambe sy elakelantrano manerana ny fokontany eto andrenivohitra. Ny hita anefa vao mainka manao maloto eo ny olona , ny antony , mety ao ny fahaterena nefa tsy mahita toerana hanaovana izany dia lasa manaonao foana . Voatery nalaina natao ohatra amin’ny zavamisy eto amin’ny firenena na somary ratsy ihany aza mba hanazavàna kokoa ny zavamisy tato anatin’ny andro maromaro nifandrohitan’ny prefektora eto Antananarivo sy ny antoko Tiako i Madagasikara .
Nilaza ny mpitandro filaminana nandritra ny tafa nataony tamin’ny mpanao gazety mba tsy ho avy hankalaza ny tsingerintaona faha15 nahaterahan’ny TIM eny Mahamasina ny vahoaka eto Antananarivo fa tsy mahazo alalana izy ireo . Marihina anefa fa nomen’ny prefektora alalana mazava ny 30 jona ity antoko ity saingy niova hevitra tamin’ny ora farany indray ity tompon’andraikitra ity . Teto dia niova tamin’ny asa tokony ho sahaniny ny mpitandro filaminana fa lasa mpanentana olona isam-pokontany indray , tsy misy antony tokony handehanana eny Mahamasina hono fa vahoaka hendry ny vahoakan’Antananarivo , ka tsy ho voarebireby ho eny amin’io andro io .
Arakaraka ny fanentanana sy fampitahorana fisamborana sy fandraisan’andraikitra anefa no vao mainka nahatonga ny olona marobe ho eny Mahamasina , tsy nandaitra ilay fanentanana nataon’ny mpitandro filaminana tamin’izy ireo . Teto dia ohatra ny naniraka ny olona hanao maloto teny rehetra teny ny fitondràna , satria raha navela nalalaka tao Mahamasina ny antoko TIAKO i MADAGASIKARA nankalaza ny faha 15 taona nahaterahany , tsy nisy ny fandehanana teny amin’ny arabe izay tena ratsy amin’ny mpitondra ohatra ny olona manao maloto eny anelakelan-trano sy andalambe . Tena torakovitra mihintsy ry zareo amin’ity resaka fidinana andalambe ity sao voaongana eo amin’ny toerany , ka na olona tsy vonona tena hanongana aza dia efa maha torana .
Ka amin’ny manaraka , mba manoro hevitra ihany izahay , rehefa tsy mametraka ny vahoaka amin’ny toerana tokony hisy azy ny fitondràna , dia naman’ny maniraka azy ireo hanao ny zavatra tsy tokony hataony , aleo ny olona hanao fety fa andraikiny ny miaro ny fandriampahalemana amin’izany , anjaran’ ny mpitandro filaminana ny manara-maso eny rehetra eny satria tsy hijery fotsiny izy ireo satria adidiny ny miaro ny vahoaka sy ny fananany , lehibe amin’izany ny vahoaka ao anatin’ny antoko Tiako i Madagasikara sy ny mpanaradia azy rehetra .
Nahomby ny seraseran-dRavalo ny sabotsy teo
Nanakoako tao amin’ny Radio France Internationale na ny RFI tamin’ny vaovaony omaly maraina tamin’ny vaovqaon’ny RFI Afrika fa nahomby ny seraseran’ny filoha Marc Ravalomanana tamin’ny sabotsy teo iny hoy izy ireo nitatitra izany vaovao izany : « communication réussie pour Marc Ravalomanana samedi dernier » hoy ny tati-baovao nataon’ity antsoian hoe Radio Mondiale na radio eran-tany ity. An’arivony ireo mpomba ity filoha ity nanerana ny arabe teto an-drenivohitra hoy ny RFI nanara-dia azy, avy eny amin’ny Hotel Carlton nanaovana ny fankalazana ny faha-15 taona, niaraka tamin’ireo antoko politika sy fikambanana samihafa, nihazo an’Ambohidahy sy Analakely ka hatreny amin’ny tranony teny Faravohitra.
Na noraran’ny mpitondra aza izany hetsika izany hoy ny RFI dia nahomby ny hetsika nataon’ny filoha Marc Ravalomanana sy ny TIM ary ireo mpomba azy tsy ankanavaka. Notsiahivin’ity radio eran-tany ity fa ho kandidà filoham-pirenena ny Filoha Ravalomanana amin’ny fifidianana filoha ho avy ary efa karazan’ny fanombohan’ny fampielezan-kevitra ho azy iny hetsika ny sabotsy teo iny. Na nisy aza ny baomba mandatsa-dranomaso roa nipoaka tetsy Analakely, izay nisakanana ireo mpanao fihetsiketsehana tsy ho eny amin’ny kianjan’ny 13 mey, tsy nitsahatra nanofahofa ny sainan’ny TIM sy ny sainam-pirenena ireo mpomba azy hoy ny mpanao gazetin’ny RFI nitatitra izany vaovao izany. Notateriny koa ireo fanehoan-kevitra amin’ny tambazotran-tserasera sosialy toy ny facebook izay nanakiana avokoa ny fitondrana Rajaonarimampianina ho mpanao jadona satria tsy namela ity antoko ity hankalaza ny tsingerin-taona nijoroany.
Mbola tsy vita ihany koa ny fankalazana fa mbola hitohy, tsy hijanona eto an-dRenivohitra izany fa hatao ihany koa any amin’ireo faritra 22 eto Madagasikara, mbola haharitra hatramin’ny taona 2018 tokoa ity fankalazana ny faha-15 taon’ny antoko TIM ity. Ankoatra izany, nanamafy ny filoha Marc Ravalomanana sy ny birao politikan’ny antoko fa mbola haverina amin’ny manaraka ny fankalazana ity tsingderin-taonan’ny TIM ity eto an-drenivohitra. Ankoatra izany, hitory ny Préfet sy ny mpitandro filaminana nanao barofo tetsy Mahamasina ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, ary efa tafapetraka omaly izany fitoriana izany, Me Olala no mpisolovava ny Kaominina amin’ity raharaha ity ; ny antoko TIM koa dia hitory ny Préfet de Police sy ny mpitandro filaminana noho ny tsy fampiharany ny didy navoakan’ny Tribunal Administra tif na ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana,sy ny fanaovan’izy ireo antsojay sy tsy fanarahan-dalàna tamin’izao fankalazana izao.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué *, 15e année Tim, 8 Juillet 2017, CIRNG Madagascar, HVM, Manif Tim, Place 13 Mai Antananarivo, SMM. Ajoutez ce permalien à vos favoris.